अचम्म !! यी क्रिकेटले करियरमा १ मात्र बल सचिनलाई फ्याके र विकेट लिए |
भारतलाई लाग्यो ठूलो झट्का, महत्वकाँक्षी चन्द्रयान–२ को प्रक्षेपण रोकियो
रंगेहात समातिने डरले झ्यालबाट हाम फाल्दा ज्यान गयो
टाइ र कोट नलगाउदा प्रिन्सिपलले शिक्षक कुटे
नेपाललाई विश्वकपसम्म पुर्याउने पुबुदुले अमेरिकाको मुख्य प्रशिक्षकले दिए राजीनामा, यस्तो छ कारण
अचम्म !! यी क्रिकेटले करियरमा १ मात्र बल सचिनलाई फ्याके र विकेट लिए
२०७४, ८ फाल्गुन मंगलवार १८:३६ February 20, 2018 ताजा खबरक्रिकेट
एजेन्सी। सचिन तेन्दुलकर क्रिकेट जगतमा भगवानको रुपमा चिनिन्छन् । उनले क्रिकेट इतिहासका अधिकांश ठूला रेकर्डहरु आफ्नो नाममा राखेका । पछिल्लो समय अस्ट्रेलियाका कप्ता स्टिभ स्मित सचिनकै पदमार्ग पछ्याउँदैछन् ।
यो पनि पढ्नुस् : सार्वजनिक ठाउँमा बिराट र अनुष्काको यस्तो हर्कत, दुनियाँ हैरान
यी दुई स्टार खेलाडीबीच एउटा अनौठो संयोग परेको छ । कमै मात्र बलिङ गर्ने स्टार ब्याट्सम्यान स्मिथले आफ्नो पूरै करिअरमा अर्का स्टार ब्याट्सम्यान सचिन तेन्दुलकरलाई एकमात्र बल फालेका छन् । संयोग त के भने त्यही एकमात्र बलमा सचिन तेन्दुलकर आउट भएका छन् ।
यो रोचक संयोग २०३ मा भएको हो । मार्च २०१३ मा भारतमा भारत–अस्ट्रेलिया टेस्ट सिरिज भएको थियो । सिरिजको तेस्रो टेस्टमा अस्ट्रेलियाले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो । अस्ट्रेलियाले पहिलो इनिङमा ४०८ रन बनाएपछि भारत जवाफी ब्याटिङमा आयो ।
यो पनि पढ्नुस् : नेपालले वेस्ट इन्डिज बिरुद्ध अभ्यास खेल नखेल्ने
त्यो इनिङमा ओपनर शिखर धवन र चेतेश्व्र पुजारा आउट भएपछि सचिन तेन्दुलकर चौथो क्रममा ब्याटिङका लागि आएका थिए । लञ्चको ठिक अगाडि ९५ औं ओभरमा अस्ट्रेलियाका कप्तान माइकल क्लार्कले स्टिभ स्मिथलाई बल दिए । त्यतिबेला स्मिथ सचिनलाई पहिलोपटक बलिङ गर्दै थिए ।
रोचक संयोग, स्मिथको पहिलो बलमै सचिन इडी कोवानको हातबाट क्याच आउट भए । त्यो नै स्मिथले सचिनलाई गरेको पहिलो र अन्तिम बल थियो । अर्को टेस्टमा स्मिथलाई कप्तानले बलिङ नै गराएनन् । त्यही वर्षको नोभेम्बरमा सचिनले टेष्ट क्रिकेटबाट सन्यास लिए ।
२०७६, ३१ असार मंगलवार १२:०९
२०७६, ३१ असार मंगलवार ०९:०१
बेन स्टोक्सले न्यूजिल्याण्डका कप्तानसँग माफी मागे
२०७६, १ श्रावण बुधबार १२:३०
२०७६, ३१ असार मंगलवार १३:४६
२०७६, ३१ असार मंगलवार १२:३९